घरमा कपाल काट्नको लागि उत्तम कैंची - जापान कैंची
घरमा कपाल काट्नको लागि उत्तम कैंची
घर / घरमा कपाल काट्नको लागि उत्तम कैंची
घरमा कपाल काट्नको लागि उत्तम कैंची ब्राउज गर्नुहोस्! प्रामाणिक छान्नुहोस् कपाल काट्ने कैंची जसले तपाईको आफ्नै वा तपाईको परिवारको कपाल काट्छ।
किफायती र राम्रो गुणस्तर कपाल काट्ने कैंची किटहरू र बाट सेट सबै भन्दा राम्रो कैंची ब्रान्डहरू! कपाल कैंचीको एक जोडी तपाईको कपाललाई जीवनभरको लागि बचाउन सक्छ।
प्रयोग गर्न सजिलो शुरुवात कपाल काट्ने कैंची जसले घरमै कपाल काट्न र काट्न सजिलो बनाउँछ!
उत्तम घर-प्रयोग हेयरड्रेसिङ कैंची अनलाइनको लागि किनमेल गर्नुहोस्!
तपाईलाई घरको प्रयोगको लागि कपाल कैंची किन चाहिन्छ? घरको प्रयोगको लागि कैंची कुनै पनि घरमा कपाल स्टाइलिस्टको लागि आवश्यक उपकरण हो। तिनीहरूले तपाईंलाई हरेक पटक सही कट प्राप्त गर्न, तपाईंको पैसा बचत गर्न, र सजिलै संग केश शैली कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ।
तर बजारमा सबै कैंचीको साथ, तपाइँ तपाइँको आवश्यकताहरु को लागी सही व्यक्तिहरु कसरी छनौट गर्नुहुन्छ?
यहाँ घरमा कपाल काट्नको लागि उत्तम कैंची छनोट गर्ने केही सुझावहरू छन्!
घरमा कपाल काट्नको लागि कुन कैंची उत्तम छ?
त्यहाँ केही विभिन्न प्रकारका कैंचीहरू छन् जुन विशेष गरी घरमा कपाल काट्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। सबैभन्दा सामान्य प्रकार भनेको सबै-उद्देश्यीय कपाल काट्ने कैंची हो, र दोस्रो पातलो कैंची हो जसले बाक्लो कपालको वजन हटाउँछ।
कपाल काट्ने कैंची घरको प्रयोगको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकारको कैंची हो। तिनीहरू ब्याङ्गहरू काट्न, तहहरू काट्न र कपाल पातलो गर्नका लागि उपयुक्त छन्।
कपाल काट्नका लागि खोल्ने र नजिक हुने दुईवटा ब्लेडसँग डिजाइन सरल छ। तिनीहरू पनि सबैभन्दा किफायती विकल्प हुन्, र ब्रान्डहरू ट्रिम गर्न, स्प्लिट-एन्डहरू, तपाईंको आफ्नै कपाल वा तपाईंको बच्चाहरूको कपाल काट्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पातलो कैंचीहरू बाक्लो कपालबाट तौल हटाउन डिजाइन गरिएको हो, र थप बल्क हटाउनको लागि उपयुक्त छ। तिनीहरूमा पातलो ब्लेडहरू छन् जसले कपाललाई समान रूपमा र सहज रूपमा काट्न मद्दत गर्दछ।
पातलो कैंची कपाल काट्ने कैंची जत्तिकै सामान्य छैन, तर बाक्लो कपाल भएकाहरूका लागि तिनीहरू उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छन्। तिनीहरूले काट्न आवश्यक कपालको मात्रा कम गर्न मद्दत गर्न सक्छन्, जसले प्रक्रियालाई धेरै छिटो बनाउन सक्छ।
घरको लागि कपाल कैंची छनोट गर्दा, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाइँ दिमागमा राख्न चाहानुहुन्छ। यहाँ केहि महत्त्वपूर्ण कारकहरू छन्:
उद्देश्य: तपाईं आफ्नो कैंची के को लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाइँ भर्खरै सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, हामी कपाल काट्ने कैंचीको एक जोडी छनौट गर्न सिफारिस गर्छौं। तिनीहरू बहुमुखी छन् र विभिन्न कार्यहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ब्लेड प्रकार: छन् कैंची ब्लेड को विभिन्न प्रकार उपलब्ध - बेभल, कन्भेक्स, सेरेटेड, आदि। बेभल र सेरेटेड शुरुआतीहरूका लागि उपयुक्त छन् किनभने तिनीहरूले चोटपटक लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। कन्भेक्स अधिक अनुभवी प्रयोगकर्ताहरूका लागि राम्रो छ किनकि तिनीहरूले तीव्र कट प्रदान गर्छन्, तर तिनीहरू निश्चित रूपमा घरमा शुरुवातकर्ताहरूले प्रयोग गर्न योग्य छन्।
ह्यान्डल प्रकार: द कैंची ह्यान्डल प्रकार तपाईंको पकड प्राथमिकतामा निर्भर गर्दै भिन्न हुन सक्छ। सबैभन्दा लोकप्रिय र एर्गोनोमिक ह्यान्डल अफसेट हो, जुन घुमाउरो छ र तपाईंको हातमा आरामसँग फिट हुन्छ। अरूसँग सीधा पकड ह्यान्डल छ, जुन अधिक परम्परागत छ। दुबै घरको प्रयोग कैंचीको लागि उत्कृष्ट विकल्पहरू हुन्।
सामग्री/स्टील: कैंचीहरू विभिन्न सामग्रीबाट बनाइन्छ, सहित कैंची स्टील, टाइटेनियम र सिरेमिक। स्टिल कैंचीहरू सबैभन्दा सामान्य र किफायती विकल्प हुन्, जबकि टाइटेनियम कैंचीहरू अधिक टिकाऊ हुन्छन्। सिरेमिक कैंचीहरू सबैभन्दा कमजोर हुन्छन्, तर तिनीहरू पनि लामो समयको लागि तीखो रहन्छन्।
मूल्य: कैंची प्रकार र सामग्रीमा निर्भर गर्दै मूल्यमा भिन्न हुन्छ। तपाइँ लगभग $ 70-150 को लागी कपाल कैंची को एक राम्रो जोडी पाउन सक्नुहुन्छ।
कपाल कैंची छनोट गर्दा, आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकताहरू विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ कुन प्रकारको कैंची किन्न निश्चित हुनुहुन्न भने, हामी कपाल काट्ने कैंचीको जोडीबाट सुरु गर्न सिफारिस गर्दछौं। तिनीहरू बहुमुखी छन् र विभिन्न कार्यहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। घरको लागि कैंची घरमा कपाल काट्नको लागि कैंची प्रयोग गर्नुहोस् घरको लागि कैंची कसरी छनौट गर्ने